မှို ၊ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး နှင့် ပင်စိမ်းကြက်ဥပေါင်း။
ကြက်သွန်ဝါကြီး ( စဉ်းပြီး ) ၀.၅ လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ ( ဓါးပြားရိုက် ) ၃ လုံး
ကြက်ပြုတ်ရည် ၂ စွန်း
ကိုးရီးယား ကောက်ရိုးမှို (ပါးပါးလှီးပြီး) ၁၀၀ ဂရမ်
ဂျပန် ရှိတာကီမှို ( ပါးပါးလှီးပြီး ) ၁၀၀ ဂရမ်
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ( ပါးပါးလှီးပြီး ) ၁၀ လုံး
ပင်စိမ်းရွက် ၅၀ ဂရမ်
၁ ။ ကြက်သွန်ဝါကြီး ကို နုတ်နုတ်စဉ်းပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ကိုဓါးပြားရိုက်ရျွ် ၅ မိနစ်ခန့် ထားပါက ဆေးဘက် ဝင်သော အာနိသင် များပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။
၂ ။ အချင်း ၁၀ လက်မ ရှိ ဒယ်အိုးပြားတွင် ကြက်ပြုတ်ရည် ၁ စွန်းခန့် ကိုအပူပေးပြီး အသင့်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဝါကြီး ကိုထည့်ချက်ပေးပါ။
၃ ။ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ကိုးရီးယား ကောက်ရိုးမှို နှင့် ဂျပန် ရှီတာကီမှို တို့ က်ိုထည့်ချက်ပေးပြီး ၂ မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပါ။
၄ ။ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် မှို များအနည်းငယ်နူးလျှင် ကြက်ပြုတ်ရည် ၁ စွန်း ထပ်ထည့်ပြီး ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ ဖြင့် ၁ မိနစ် ခန့် ကြော်ပေးရျွ် အနည်းငယ် အကျက်လွန်နေသည်များ ၊ ညိုမဲ နေသော အရာများ ကိုဖယ်ထုတ်ပေးပါ။
၅ ။ ကြက်ဥ များကို ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အနည်း ငယ်ဖြင့် ကျေအောင်ခေါက်ရျွ် ပင်စိမ်းရွက်များ ကိုလည်းထည့်မွှေထားပါ၊ ကြက်ဥ များကို အသင့်ကြော်ထားသော ပါဝင် ပစ္စည်းများပေါ်လောင်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးရျွ် မီးပျော့ပျော့ ဖြင့် အဖုံးအုပ်ပြီး ၅ မိနစ် ခန့် ပေါင်းပေးပါ ၊ မှို ၊ ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး နှင့် ပင်စိမ်းကြက်ဥပေါင်းကျက်လျှင် အစိပ်လိုက်လှီးဖြတ်ရျွ် ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး နှင့် ပါစလီရွက် အနည်းငယ် တို့ ဖြင့်အလှဆင်တည်ခင်းပါ
Mushroom, Tomato and Basil Frittata.
Minced Yellow Onion ½ number.
Pressed Garlic3cloves
Chicken Broth2tbsp
Sliced Erygyii Mushroom 100 g
Sliced Shitake Mushroom 100 g
Sliced Cherry Tomato 10 numbers
Fresh Basil Leaves 50 g
Mince Yellow Onions and press garlic then let sit for5minutes to bring out their hidden health benefits.
Heat 1 tbsp broth ina10-inch stainless steel skillet. Healthy Sauté onion over medium low heat for3minutes, stirring frequently.
Add 1 tbsp broth, Cherry Tomato, salt, and pepper then cook for another minute. Stir well, and gently scrape pan withawooden spoon to remove any slight burning.
Beat eggs well, and season with salt and pepper. Mix in chopped basil. Pour eggs over vegetables evenly and turn heat to low. Cover and cook for about5minutes, or until firm. Cut into wedges and serve with sliced Cherry Tomato and Parsley as garnish.